Global Voices မြန်မာ » HIVရှိနေသူ တောင်အာဖရိကမိန်းမပျိုလေး ဆစ်ဒီဘရောင်းမှာ ဘာမှဖုံးကွယ်စရာမရှိ · Global Voices မြန်မာ » Print
ဘာသာ​ပြန်​တင်​ခဲ့​သည့် နေ့စွဲ 11 မတ် 2017 17:27 GMT 1	 · ရေးသား​သူ Ndesanjo Macha ဘာသာ​ပြန်​သူ Lwin Htut Kyaw
အမျိုးအစားများ: အာဖရိက ကန္တာရဒေသခွဲ, တောင်အာဖရိက, ကျန်းမာရေး, ပြည်သူသတင်း, လူငယ်များ
မိမိမှာ HIV ပိုးရှိနေတယ်လို့ တွစ်တာမှာတင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၂နှစ်ရှိ တောင်အာဖရိကအမျိုးသမီးလေး ဆစ်ဒီဘရောင်း|ဓါတ်ပုံ:တွစ်တာ
အသက်၂၂ အရွယ် တောင်အာဖရိကအမျိုးသမီးလေး ဆစ်ဒီဘရောင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လက တွစ်တာမှတဆင့်သူမဟာ HIV ပိုးရှိနေပါတယ်လို့ လူအများကိုဖွင့်ပြောခဲ့ တဲ့အတွက် ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူအများအပြားက ချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။
ဘရောင်းဟာ သူ့ဘဝတလျှောက်လုံး သူ့မိဘတွေကို သေဆုံးစေခဲ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်ပိုးနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဆယ်ကျော်သက်ဘဝအစပိုင်းကျမှ မွေးကတည်းကရောဂါကူးစက်ခံထားရကြောင်းကို သူသိခဲ့တာပါ။
ယခင်လက သူဟာ ဘယ်လိုရှင်သန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ သူ့ဘဝဇာတ်လမ်းကို လူတိုင်းသိအောင် တွစ်တာ(twitter)ကနေ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ။
When I found out at 14 that I was HIV positive, I didn't think I would live to see 18,I am turning 22 this year. ❤❤pic.twitter.com/drZDVCorPK 
ကျွန်မမှာ HIV ရှိတာကို အသက်၁၄နှစ်အရွယ်တုန်းက သိခဲ့ရတုန်းက အသက် ၁၈ နှစ်ထိနေရမယ်လို့တောင် မထင်ခဲ့မိတာ အခု ကျွန်မ ၂၂ နှစ်ပြည့်ပြီ ❤❤
HIV ပြန့်ပွားမှုကာကွယ်ရေး ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း Avert ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် အရ တောင်အာဖရိကဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ HIV ပြန့်ပွားမှုအဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်က ကူးစက်ခံရသူဦးရေ ၇ သန်းရှိလာတဲ့အချိန်မှာ၊ နိုင်ငံအတွင်း HIV ပိုးပိုင်ရှင်အသစ် ၃၈၀၀၀၀ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ မှာတော့ AIDS နှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများကြောင့် တောင်အာဖရိကလူဦးရေ ၁၈၀၀၀၀ လောက် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
တောင်အာဖရိကမှာ HIV ပြန့်နှံ့တာဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ အဆင့်အတန်း မညီမျှမှု၊ လူမှု့ဘဝ မတည်ငြိမ်မှု၊ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုများပြားခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကို အဆင့်အတန်းနိမ့်ချမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဆေးကုသခွင့် မျှတစွာ မရနိုင်ခြင်း နှင့် အကန့်အသတ်ရှိခြင်း စသည်တို့အပြင် ကူးစက်ရောဂါများကို ဖြေရှင်းရန် ခေါင်းဆောင်မှုညံ့ဖျင်းသော အစဥ်အလာရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ တောင်အာဖရိက AIDS အဖွဲ့အစည်း (AIDS Foundation South Africa) က မှတ်ယူ ထားပါတယ်။
လူသားသိပ္ပံသုသေသနကောင်စီ (Human Sciences Research Council)က လေ့လာခဲ့ တဲ့ “တောင်အာဖရိကရှိ HIVနှင့်နေထိုင်သူများအပေါ်ထားသော အမဲစက် အညွန်းကိန်း” အစီရင်ခံစာ က HIVနှင့်နေထိုင်သူ လူ ၃ ဦးမှာ ၁ ဦးဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းမှ ခွဲခြားဆက်ဆံ၊ မလိုမုန်းထား၊ တယူသန်အယူမှားဖြင့် ဆက်ဆံသော အမဲစက်များကို ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီး ထိုအမဲစက်ဒါဏ်ကို ခံရပါတယ် ။
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ သူမရဲ့အခြေအနေကို သတ္တိရှိစွာတင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘရောင်းကို တွစ်တာအသုံးပြုသူတွေ ချီးကျူးကြတာ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တွစ်တာအသုံးပြုသူ “Wako Joel”ဆိုရင် သူမဟာ တောင်အာဖရိကရဲ့ HIV/AIDS သံတမန်လုပ်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ ။
ကျနော့်အမြင်။ ။ #SouthAfrican  အမျိုးသမီး @saidy_brown  ဟာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှာ ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ဖို့ #Africa  ရဲ့ #HIV_AIDS နဲ့ နေထိုင်သူတွေရဲ့ သံတမန်ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ယူဂန်ဒါ တေးသံရှင် Gitts Beats က သူမရဲ့သတ္တိဟာ အားလုံးအတွက်ဥပမာအဖြစ် ရှိသင့်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ။
တခါတလေ ကျမတို့ဟာ အရာရာတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်မူရှိပြီး စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။ @saidy_brown  က မနေ့က ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ဒီနေ့ပြောနိုင်ရမယ်။
Sibusiso Msesiwe ကဆိုရင်။ ။
@saidy_brown  Just read your article. In tears as I'm burying my 2nd cousin due to the virus.
@saidy_brown  ညီမရဲ့ ဆောင်းပါးကို အခုပဲ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ကျုပ်ရဲ့ နှစ်ဝမ်းကွဲတစ်ယောက် ပိုးကြောင့်ပဲသေသွားတာ အခုဖတ်လိုက်ရတော့ မျက်ရည်တွေလည်လာတယ်။
Della Rovere သူမရဲ့ ရဲရင့်မှုကို ယခုလို ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ။
@saidy_brown  မိန်းခလေး မင်းက ငါ့ရဲ့သူရဲကောင်းပါပဲ။ မင်းက အရမ်းအံအားသင့်စရာကောင်းပြီး သန်မာတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဘဝသင်ခန်းစာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Mark Gamanya ကဆို ဘရောင်းဟာ HIV နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူထုကိုကျန်းမာရေးအသိပညာပေးရာမှာ ဦးဆောင်ပါ၀င်ကူညီစေချင်ခဲ့တယ်။ ။
@saidy_brown  ရေ ဘယ်သူမှ HIV/AIDS ကို ခံနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ မင်းကတော့ HIVအမဲစက်ဒါဏ်ကို ခံရသူတွေအတွက်တော့ ချန်ပီယန်တစ်ယောက်ပါပဲ၊ တခြားသူတွေကို ဆက်ပြီး ပညာပေးပေးပါ။
ဘရောင်းရဲ့အကြောင်းက ကမ္ဘာတဝန်းက လူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာစွဲထင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ။
@saidy_brown  ဘီဘီစီ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ မင်းအကြောင်းကို ဖတ်ရတယ်။
မင်းက အံသြစရာကောင်းတဲ့ လူသားတစ်ဦးဖြစ်ရမယ်။
မင်းအတွက် ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ကျန်းမာပျော်ရွင်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
တောင်အာဖရိကမှာ HIV နှင့်နေထိုင်နေပြီး အမဲစက်ဒါဏ်ကိုခံနေရသူတစ်ဦးရဲ့ အခက်အခဲကို သင်မှန်းဆရခက်နေရင် အမည်မဖော်သူတွစ်တာသုံးသူတစ်ဦးက ဘရောင်းကို မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကိုသာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ။
@saidy_brown  ခင်ဗျား HIV ကို လိင်ကိစ္စကြောင့် ကူးခဲ့တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားဒီလိုပဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောနိုင်ပါ့မလား။
ဆိုတော့ ဘရောင်းဒီလိုပဲ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ။
ပြောရမှာပေါ့။ လူတစ်ယောက် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပိုးကူးခဲ့တယ်ဆိုတာကာ ဘာအရေးပါလို့လဲ။ HIV က HIV ပဲလေ ဟုတ်ဘူးလား။
ဟုတ်ပါ့၊ Scotch (@MMaenza1) ရဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို တွစ်တာအသုံးပြုသူနောက်တစ်ဦးကတော့ ဒီလိုပြန်ချေပလိုက်တယ်။ ။
@MMaenza1  ကျုပ်တော့ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။ ခင်ဗျား မေးခွန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ #HIV  ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ဘယ်လို ကူညီရာရောက်လဲ။ ကျနော် နဲ့ပဲ သဘောတူတယ်။ ဘယ်လိုကူးလာတယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုအရေးကြီးလို့လဲ။
အမေရိကန်နိုင်ငံ က Michael Très ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုအားပေးခဲ့တယ်:
@Nala_RSA @saidy_brown  God bless you! I think we are trying to let the world know that there is STILL life even in the darkest situations!
ဘုရားသခင် မစပါစေဗျာ။ အခက်ခဲဆုံး အမှောင်မိုက်ဆုံး အချိန်မှာတောင် ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှုဆိုတာ ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ကျတော်တို့အားလုံးဟာ တကမ္ဘာလုံးကို ပြသနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
URL to article: https://my.globalvoices.org/2017/03/1482
 ထိုအမဲစက်ဒါဏ်ကို ခံရပါတယ်: http://www.avac.org/blog/women-south-africa-hiv-stigma-still-runs-strong